Semalt: 3 Migwagwa-Kutya SEO Practices Unofanira Kuziva
Kutsvaga Engine Optimization (SEO) inzira yekusimudzira tsananguro yewebsite yako pane web indexes. Inoramba ichishandiswa nehuwandu hwemasangano maduku uye makuru. Iyi ndiyo nzira inoshandiswa nekutengesa kana nzvimbo inogona kuwana mukurumbira pakati pevatengi uye inogona kuwedzera maropafadzo avo. Muchiitiko chekuti iwe une bhizinesi rinodikanwa newebsite kunyoresa pamusoro pekugadzirwa kwewebhu yepamusoro, panguva iyo iwe unonyanya kushandisa iwe webhutheni guru guru sangano kuti uvandudze nzvimbo yako - fake usa passport.
Frank Abagnale, Mutungamiri Wekubudirira Kwevateresi Semalt Dhijita Dhidhijita, anotsanangura zvitatu zvakasiyana zveSOO maitiro uye maitiro aunofunga kufunga nezvawo usati waenderera mberi ne SEO.
Chikwata chitsvuku SEO inomira pakati pezvinonyanya kuzivikanwa kweWeb nzira yekugadzirisa uye ndeye inoshandisa nzira nemaitiro ekusimudzira nhare yekutsvaga internet yepaiti isingayambuki migwagwa nemitemo yewebhu. Chikamu chehurongwa hutsvene hunotsvaga kutsvaga kugadzirisa mafungiro hunosanganisira kushandiswa kwekuisa pamusoro pezvinyorwa zvekugadzirisa zviri nani, site HTML kukurudzira, kuvaka, kuedza kwebasa, nekutsvakurudza. Paunosarudza nzira iyi ye SEO, iwe unogona kutarisira mberi kukurudzirwa muhuwandu hwako.
Hasha yehangu SEO inorudzi rwehutachiona hunoita kuti hugadzirise zvikanganiso zvakasiyana mukugadzira kana zvishandiso zvekutsvaga webhu kune chinangwa chekupedzisira kuti uwane nzvimbo dzakakwirira dzemasayiti. Iyi ndiyo nzira yeSeO haisi yepamusoro pewebsite yekugadzirisa mitemo yakagadziriswa nematsotsi ekutsvaga webhu uye kunyanya Google. Paunosarudza urongwa uhwu, unogona kutarisira kushandiswa kwekwenyoro, kubhurwa asi kubudirira kwenguva pfupi kubudirira muhutachigaro hwebhu.
Grey chikwata SEO rudzi rwekutsvaga injini yekutsvaga iyo isiri yera kana kuti yakasviba. Iyi ndiyo nzira isingashandisi zvakakwana nhausi yebhu web optimization uye pane kusimbisa zvose. Pasinei nokuti ndeye nekuda kwemasimba kubva panzvimbo kana sangano kana kuti kuratidza zviitiko zviri nani, mamwe masangano ekugadzirisa hutachiona anogona kukonzera Grey SEO kune imwe nguva.
Kubva ikozvino iwe unoziva zvakasiyana-siyana webhutani yekugadzirisa kukurudzira nzira uye maitiro, unofanira kuzvisarudzira iwe unowirirana neiko. Zvakakosha kusarudza webhu hunovandudzwa kana sangano rekushandisa webhusaiti, rinoedza kutora mushure mutsvuku webhutani yekugadzirisa kuitira kuti uchengetedze mitemo yese uye ikupa iwe kutsungirira kukuru kutsvaga injini yekugadzirisa chikonzero.